नेशनल लाइफको खुद नाफा बढ्यो, खुद बीमाशुल्क कति ? - Aathikbazarnews.com नेशनल लाइफको खुद नाफा बढ्यो, खुद बीमाशुल्क कति ? -
can you write an essay in3hours thesis writing services south africa camera ready research paper creative writing gothic horror lasalle ma creative writing mba homework help creative writing module k12 list of vocabulary words for creative writing com homework help cc3 best linkedin profile writing service uk homework help cpm int2importance of figures of speech in creative writing princeton supplemental essay help bsu creative writing essay editing apps refugee creative writing story creative writing plymouth cca homework help creative writing hobby monster resume writing service cost careers using creative writing professional thesis editing help write my essay arabic homework help for doing your homework metaphors in creative writing college homework help reddit someone write my personal statement for me creative writing workshops in ireland creative writing in workplace
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा ५ अर्ब ४८ करोड १३ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको यहि अवधिको तुलनामा १ अर्ब ५९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अर्थात ४०.१ प्रतिशत बढी हो।
गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले ३ अर्ब ८८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो।
सो अवधिसम्ममा इन्स्योरेन्सले पुनर्बीमा कमिशनबाट २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, लगानी, कर्जा तथा अन्यबाट १ अर्ब ३९ करोड ५ लाख रुपैयाँ र बीमालेख धितोमा कर्जाबाट २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।
यस अवधिसम्ममा इन्स्योरेन्सले बीमांकिय मूल्यांकन अघि २३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६ लाख ३२ हजार रुपैयाँले मात्रै बढी हो।
गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीले २३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो।
चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ८ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीको जीवन बीमा कोष ३८ अर्ब १ करोड १३ लाख, जगेडा कोषमा एक अर्ब २४ करोड ८६ लाख र महाविपत्ती कोषमा ३० करोड २५ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ।
कुल ९ लाख ३ हजार ९६० वटा बीमालेख कायम रहेको इन्स्योरेन्सले ५ अर्ब ५४ करोड ५ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ। इन्स्योरेन्सले ११ हजार ८० वटा दाबी बापत १ अर्ब ७१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ भने ४० करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
कम्पनीको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी १५ रुपैयाँ ३४ पैसा, प्रतिशेयर नेटवर्थ १४९ रुपैयाँ ६८ पैसा र मूल्य आम्दानी अनुपात ७६.२५ गुणा रहेको छ।
बरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल सम्मानित
कुनैपनि बैकिङ कार्यालयमा हड्ताल नपाउने
नबिल बैंकमा ८९ जनालाई जागिरको अवशर, दुई बीमा कम्पनीलाई चाहियो डेपुटी प्रुमख कार्यकारी